Arsenal oo dooneysa inay midkood soo xero geliso Llorente, Lopez ama Stevan Jovetic. - Caasimada Online
Home Warar Arsenal oo dooneysa inay midkood soo xero geliso Llorente, Lopez ama Stevan...
Arsenal oo dooneysa inay midkood soo xero geliso Llorente, Lopez ama Stevan Jovetic.
Arsene Wenger ayaa markaan suuqa u geli doona bedelkii Robin van Persie wuxuuna mar kale alaabka u garaaci doonaa kooxo ay ka gadoodsan yihiin weeraryahano tayo leh.
Tababaraha Arsenal ayaa si joogta ah maanka ugu haaya inuu Janaayo suuqa ka doonto weeraryahan buuxiya booskii uu Man Utd uga biiray ninka reer Holland.
Waxaana jeebka Wenger ku jira 35 milyan oo ginni oo uu ku doonto weeraryahan ka ciyaara bartamaha weerarka.
In kastoo uu sanadaan lasoo wareegay Olivier Giroud hadana uma muuqan mid baahi tiray weerarka Arsenal, tiiyoo uu weeraryahanka reer France ka dhaliyey keliya hal gool Premier League.
Waxaa uu horaanba calaamadeytay weeraryahanka Atletico Madrid Adrian Lopez, iyadoo ay soo daawadeen indha-indheeyeyaal ka socda Gunners.
Weeraryahanka Athletic Bilbao Fernando Llorente ayaa ah xidig uu qiimeynaayo Wenger. Iyadoo uu qandaraaskiisu dhacaayo dhamaadka xilli ciyaareedka, taas macnaheeda ayaa ah in ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Spain uu diyaar u noqdo inuu ka tago kooxdiisa.
Qorshaha kale ayaa ah weeraryahanka laga daba dhacay ee Fiorentina Stevan Jovetic kasoo 12 bilood ka hor diirada u saarnaa Arsenal , halka ay kooxda ka dhisan London horay usoo daawatay weeraryahanka Palermo Abel Hernandez.
Si talaadadii laga soo xigtay Sportsmail, Gunners ayaa sidoo kale dooneya saxiixa garabka Crystal Palace Wilfried Zaha – 19 jirkaan ayaana ka ciyaari kara weerarka dhexe.